Abuuri qaybaha kala duwan ee la xiriira CivilCAD - Geofumadas
Luulyo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Iyada oo maqaalkani soo dhaweynayo wejiga cusub ee leh goobta rasmiga ah CivilCAD, shaqo weyn oo ka mid ah asxaabtii ARQCOM ee ka soo horjeedda dhammaadka sannadka 15 iyada oo ka badan isticmaalaha 20,000 ee Latin America.
Qeybteeda cusub ee "Casharrada" shaqooyinka xiisaha leh waxaa lagu soo daray caqligu talaabo talaabo talaabo ah. Xaaladdan oo kale waxaan rabaa inaan muujiyo tusaalaha abuuritaanka qeybaha iskutallaabyada oo loo maro dhidibka dhexe iyadoo la adeegsanayo CivilCAD.
Casharadaan waxaa lagu dhisay afar qaybood:
1. Dhismaha qaabka wareega dijitaalka. Eeg muqaalka
Marka ugu horreysa ee la soo bandhigo qaabka qodobbada ayaa la sameeyaa, sababtoo ah kiiskan oo leh dalal macluumaad leh ayaa loo adeegsadaa qaabkan soo socda:
Lambarka dhibic, Iskuxirka X, Iskuxirka Y, sare u qaadka, faahfaahin
Kaddib marka la soo dhoofiyo qodobada saddexaad ee jiilka qaabka dijitaalka ah ayaa la sharaxay.
Ugu dambeyntii, dhismaha heerarka heerarka hoose ayaa la sharaxay, oo tilmaamaya tallaabo kasta oo lakabka meesha xogta lagu kaydinayo.
Faylasha saldhigga ayaa sidoo kale lagu soo daray si qofka isticmaala uu u kobciyo talaabo talaabo:
PuntosSB.txt meesha dhibcaha ay ku jiraan
Qeybaha kala duwan (.dwg) oo ah sawirka ugu dambeeya
Xogta joometeriga (.sec) ee ku jira faylka qaabeynta qaybta
2. Soo saarida idaacadaha ee wadada wadada. Eeg muqaalka
Marxaladdaan, xariiqa profile waxaa la dhisay, kaas oo saldhigyada laga soo saaro mitir kasta 10.
Tababarka macallinimada ayaa sii wadaya calaamad la mid ah, sidaa darteed isticmaaluhu wuxuu isku dayi karaa isaga qudhiisa, tusaale ahaan:
Taas awgeed, waxaan sameynaa: CivilCAD > Altimetry> Axis Mashruuca> Saldhigyada Calaamadaha
Nidaamka ayaa na weydiisanaya in aan doorto cirifka, waxaannu taabannaa halka uu ku yaallo halka uu ka bilaabmayo, waxaynu samaynaa geli si aan u ansixino nooca aan ku raacsan nahay magacaabista 0 + 00.
Kadibna nidaamku wuxuu na weydiistaa dhererka qaybta ku yaal midigta iyo bidixda. Waxaan u isticmaali doonaa tusaalahan25.00 labada dhinac.
Kadibna nidaamka wuxuu na weydiistaa qaab noocee ah waxaan dooran doonaa saldhigyada:
Wareegga, waxaa loola jeedaa masaafada ujeedka, tusaale ahaan mitirada 20 kasta.
Masaafada, waxaa loola jeedaa meel fog oo ka soo jeedda asal ahaan, tusaale ahaan mitirka 35.25.
Xilliga, haddii aanu rajeyneyno inaan galno qaabka saldhigga, sida 0 + 35.20
Point, tani waa haddii aan rabno in aan ku tilmaamno tilmaamaha ku yaal khadadka
Dhamee, si aad u dhameysid jadwalka.
Xaaladdan, waxaan isticmaali doonaa wejiga koowaad, (dhexda) si aan u qoro warqad I, ka dibna waan sameynaaKu qor.
Dhamaadka marxaladan qaybaha kala duwan ee dhulalka dabiiciga ah ayaa la dhisay.
3. Dhisidda naqshad sameynta Eeg muqaalka
Horeba marxaladdaan, profile-ka ee la dhisay qaybta hore ee naqshadeynta ayaa la sawiray, isagoo tilmaamaya curfaha tooska ah iyo calaamadaynta qodobbada xiisaha curyaaminta (PCV, PIV, PTV). Sidoo kale xayawaanka.
4. Naqshadaynta qaybta caadiga ah. Eeg muqaalka
Sida tallaabada ugu dambeysa, tababarka wuxuu muujinayaa dhismaha qaybta caadiga ah ee fasalka.
Maadaama ay la shaqeyso CivilCAD, lakabka asaasiga ah, galka iyo lugaha ayaa la dhisaa. Gabaygu waa isku mid ...
Dib ugu noqosho asalka asalka ah, waxaan ku dhowaan diyaar u nahay inaan soo saaro qaybaha kala duwan.
Qeybaha hoose ayaa kuu oggolaanaya inaad qaabeyso fursado dheeraad ah sida:
Cuntada. Waxaa suurtogal ah in la qeexo haddii aan rabno in boodhka la tixgeliyo oo kaliya marka ay dhammaato meesha la gooyey oo aan aheyn meel bannaan ah (buuxbeelan). Waxaan sidoo kale dooran karnaa in aan loo tixgelin si qotodheer mar walba, iyo sidoo kale cabbirka.
Miisaanka Halkaan waxaan ku qeexaynaa saamiga miisaanka qiyaasaha iyo qiyaasaha ee sawirka qayb kasta.
Fursadaha Halkan waxaa ku jira waxyaabo dheeraad ah oo u dhaxeeya cirifka toosan, garabka toosan iyo xisaabinta kale ee ka baxsan tababarkan.
Ka hor inta aan la sameyn, waxaan arki karnaa sida ay u eegi doonaan. Tani waxaa lagu sameeyaa badhanka Dib u eegid. Halkan waxa aad ka arki kartaa goob kasta oo ay sawir, sarreeya ee asaasiga ah, gooyaa oo buuxi. Iyada oo badhanka aqbalaan waxaan dib ugu noqonaynaa guddiga weyn.
Taasna waxaa qaybo ka mid ah qaybo ka mid ah profile.
Waxaan ku amaanayaa dadaalka ARQCOM, hubaal Casharrada, kuwaas oo kor u qaadi doontaa qalab maamulka waayo-aragnimo user in, iyadoo ay ku jiraan 2013 ay maamulaan on AutoCAD, Bricscad V12 PRO iyo wakhtigii ZWCAD gudahood waa beddeli jaban AutoCAD.
Post Previous«Previous Maxay ahayd nooca ugu fiican ee AutoCAD?
Post Next U fiirso UTM isuduwidda Khariidadaha Google, oo isticmaalaya wax! Nidaam kale oo isudduwe ahNext »
2 Jawaab in "Abuuro qaybaha kala duwan ee la adeegsanayo" CivilCAD "
Diseembar, 2017 at
iyo haddii si isku mid ah laakiin la qaybaha iskutallaabta in aadan haysan wax taaj oo ka mid ah width sameeyaa haddii aan waxa laga yaabaa in variable
Walter J. Padilla P. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax weyn, oo ay ugu mahad celinayaan qalab naqshad leh.